किरण नेपाली द्वारा भारतीय प्रधान मन्त्रि मोदीलाई खुल्लापत्र: ‘मिचेको भूमि छोड’ भन्दै । - Namaste Online TV
किरण नेपाली द्वारा भारतीय प्रधान मन्त्रि मोदीलाई खुल्लापत्र: ‘मिचेको भूमि छोड’ भन्दै ।
नमस्ते अन्लाईन टिभी काठमाडौँ : चलचित्र कर्मी कलाकार किरण नेपाली द्वारा भारतीय प्रधान मन्त्रि मोदीलाई खुल्लापत्र: मोदी जी, तपाई मेरो लागि भारतकोे प्रधानमन्त्री भन्दा पनि सँधियार सत्रुराष्ट्र भारतको प्रधानमन्त्री हो । तिमीलाई यही नाम दिन चहान्छु, त्यही नामले सम्बोधन गर्न चाहन्छु, सँधियार सत्रु राष्ट्र भारत ।
मोदी, हामी तिमीलाई आध्यात्मिक मान्छे ठानेर झुक्किएका रहेछौँ । तिमी त छिमेकीको घरमूली कमजोर देखेर छिमेकीकी आमा बलात्कार गर्ने दानव रहेछौँ । तिमीले नेपाल मात्र होइन, सीमाना जोडिएका सबै छिमेकीका आमाविरुद्ध दुर्व्यवहार र हातपात गरेका छौँ । तिमी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय आतंकवादीको नेता हौं । अध्यात्म र दर्शनको बुर्का लगाएर आफ्नो दानवीय चरित्र लुकाउँदैछौँ ।
छिमेकीको मातृबलात्कार गर्नेवाला मित्रराष्ट्र हुँदैन, सँधियार सत्रु राष्ट्र हुन्छ । तिमी हिन्दुको नाममा कलंक हौं । तिमीले विश्वमा धेरै हिन्दूत्व र अध्यात्मिक राजनीतिको भाषण गर्दै हिँड्यौ । तर, तिमीले बुझ्नुपर्छ कि विश्वमा अध्यात्मिक राजनीतिको नेतृत्व तिमीले होइन हामीले गर्छौँ । किनकि, छिमेकीकी आमालाई संकटका बेला बलात्कार गर्नेवाला अध्यात्मिक र हिन्दु हुन सक्तैन । र, अध्यात्म र दर्शनको विश्व नेतृत्व गर्न भौगोलिक रुपमा देश ठूलो भइरहनु पर्दैन । तिमी कौरव हौ, हामी पाण्डव हौ । त्यसैले हामी तिमीलई थोरै हतियारले पनि जित्ने छौँ ।
अन्यायका विरुद्ध निहत्था भए पनि आक्रमणमा उत्रिन गीता, रामायण, महाभारतले नै हामीलाई सिकाएका छन् । तर, त्यसपूर्व एक पटक क्षमा दिएर हेर्नुपर्छ भनिएको छ । त्यसैले हामी नेपालीमा क्षमाको संस्कार छ । तिमी सुध्रन्छौ भने हामी तिम्रो मुर्खतालाई पुनः एक पटक क्षमा दिन्छौँ । नत्र चाँडै नै अब यो संसारका सबै विद्यालयका विद्यार्थीले आफ्नो टेबलमाथि भारतविहीन ग्लोब राखेर भारत भन्ने देश यतैकतै थियो भनेर खोजिरहेका हुनेछन् ।
पहिला त हाम्रा गोर्खा रेजिमेन्टका नेपालीहरुले तिम्रो हतियार तिमीलाई नै बुझाएर तिमीमाथि खुकुरी दाग्ने छन् । बेलायती सेनाबाट मात्र होइन पछिल्लो समयमा अमेरिका लगायत अन्य देशमा सैनिकमा रहेका सारा नेपालीहरु तिमीलाई धुलीसात गर्न आक्रमणमा उत्रिने छन् । हिजो तिमीलाई स्वतन्त्र गराउन अंग्रेजसँग खुकुरी मात्र लिएर तोपका विरुद्ध भिडेका नेपालीहरूसँग आज त आधुनिक हतियार पनि छन् । भौतिक रुपमा भारतलाई खत्तम गरिसकेपछि तिमीविरुद्धको घृणा प्रदर्शन गर्दै करोडौं नेपालीहरुले एकै पटक थुकेरै ग्लोवबाट भारतको नक्सा मेटाइदिने छन् ।
के तिमी सुध्रन तयार छौ ? अथवा, कौरवजस्तो यद्धको लागि आत्मविनास निम्त्याउन चाहन्छौ ? निर्णय लिनुपूर्व तिमी यो विचार गर कि संसारका हिन्दू नै तिम्रो विरुद्धमा छन् । संसारका इस्लामहरू तिम्रो विरुद्धमा छन् । संसारका बुद्धमार्गीहरू तिम्रो विरुद्धमा छन् ।
संसारका क्रिश्चियनहरू तिम्रो विरुद्धमा छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त हिन्दूहरू नै तिम्रो विरुद्धमा छन् । त्यसैले तिम्रो कारणले विश्वयुद्धको खतरा छ र अर्को महाभारतमा पनि जीत सत्यको हुनेछ, जीत हाम्रो हुनेछ । बुद्धभूमि, शिवभूमि, सीताभूमि, मनुभूमि, व्यासभूमिको जीत हुनेछ । त्यसैले तिमीले आफ्नो विनास ननिम्त्याऊ । नेपालको मिचेको भूमि छोड । टिष्टादेखि कांगडासम्मको भूमिबाट तुरुन्त आफ्नो पुरानो भूमिमा जाऊ । आशा छ तिमीले आफ्नो काल निम्त्याउने छैनौ ।
एक देशभक्त नेपाली नागरिक
झरना थापाको गल्तीले गर्दा काभ्रेका वीरध्वजलाई (खाई न पाई छालाको टोपी लाई) भएको छ